[ ကြော်ငြာ ] နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် အထူးဈေးနှုန်းနဲ့ တာချီလိတ် - ချောင်းသာ - ရန်ကုန် - တာချီလိတ် အပန်းဖြေခရီး | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
[ ကြော်ငြာ ] နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် အထူးဈေးနှုန်းနဲ့ တာချီလိတ် - ချောင်းသာ - ရန်ကုန် - တာချီလိတ် အပန်းဖြေခရီး
နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် အထူးဈေးနှုန်းနဲ့ တာချီလိတ် - ချောင်းသာ - ရန်ကုန် - တာချီလိတ် အပန်းဖြေခရီး
ချောင်းသာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရီးနဲ့ ရန်ကုန်ကို အေးအေးဆေးဆေး အလည်အပတ်သွားချင်တဲ့ တာချီလိတ်က မိတ်ဆွေတို့အတွက် တာချီလိတ် - ချောင်းသာ - ရန်ကုန် - တာချီလိတ်ခရီးစဉ်ကို J My King Hotel က စရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လ (၁၇)ရက်နေ့ကနေ မတ်လ (၂၂)ရက်နေ့အထိ (၆)ရက်တာခရီးစဉ်အတွင်း အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်၊ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်များမှာ တည်းခိုနေထိုင်စရိတ်၊ အစားအသောက်၊ သွားလာရေးနဲ့ ရန်ကုန် သင်္ဘောပေါ်မှာ ဒင်နာပါတီ အပါအဝင် အပြီးအစီးအတွက် တစ်ဦးကို ကျပ်(၇)သိန်းနှုန်းနဲ့ စီစဉ်ပေးထားတာပါ။
စာရင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ထားတဲ့အပြင် လူဦးရေလည်း ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
တာချီလိတ် - ရန်ကုန် - တာချီလိတ် အသွားအပြန်ကို မန်းရတနာပုံလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ စီစဉ်ပေးထားပြီး ချောင်းသာမှာ Gerizim Hotel Resort မှာ (၃)ညအိပ် ၊ ရန်ကုန်မြို့မှာ (၂)ညအိပ် တည်းခိုနေထိုင်ဖို့နဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာ ဒင်နာစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ချောင်းသာမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး အပန်းဖြေပြီး ရန်ကုန်မှာ လည်ပတ်ဖို့နဲ့ ဒင်နာပါတီအတွက် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ဈေးနှုန်းသက်သာ သလောက် တန်မှတန်တဲ့ ချောင်းသာ၊ ရန်ကုန်အပျော်ခရီးစဉ်အတွက် ဆက်သွယ်စာရင်းပေးမယ်ဆိုရင် ဖုန်း 095240445 နဲ့ 08451748 တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်သလို တာချီလိတ်မြို့ မကာဟိုခမ်းရပ်ကွက်၊ မေဖလားဝါးကွင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ J My King Hotel ရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်မှာလည်း လာရောက် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးအပြီးအစီး စားရိတ်ငြိမ်း တစ်ဦးလျှင် ကျပ်(၇)သိန်း
1. တာချီလိတ် မှ ရန်ကုန် လေယာဉ်ခ
2. ရန်ကုန် မှ ချောင်းသာ အသွားအပြန် ကားခ
3. ချောင်းသာမှာ (၃)ည ဟိုတယ် တည်းခိုခ
4. ချောင်းသာမှာ နံနက်၊ နေ့လည်၊ ညစာ
5. ရန်ကုန်မှာ (၂)ည ဟိုတယ် တည်းခိုခ
6. ရန်ကုန်မှာ (၂)ရက် နံနက်၊ နေ့လည်၊ ညစာ
7. ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဘုရားဖူး လည်ပတ် ကုန်ကျစရိတ်
8. ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဘောပေါ် ညစာ
9. ရန်ကုန် မှ တာချီလိတ် လေယာဉ်ခ
နှရောသီ ကြောငျးပိတျရကျ အထူးဈေးနှုနျးနဲ့ တာခြီလိတျ - ခြောငျးသာ - ရနျကုနျ - တာခြီလိတျ အပနျးဖွခေရီး
ခြောငျးသာ ပြျောရှငျဖှယျရာခရီးနဲ့ ရနျကုနျကို အေးအေးဆေးဆေး အလညျအပတျသှားခငျြတဲ့ တာခြီလိတျက မိတျဆှတေို့အတှကျ တာခြီလိတျ - ခြောငျးသာ - ရနျကုနျ - တာခြီလိတျခရီးစဉျကို J My King Hotel က စရိတျသကျသကျသာသာနဲ့ စီစဉျပေးထားပါတယျ။
၂၀၁၉ခုနှဈ မတျလ (၁၇)ရကျနကေ့နေ မတျလ (၂၂)ရကျနအေ့ထိ (၆)ရကျတာခရီးစဉျအတှငျး အသှားအပွနျ လယောဉျလကျမှတျ၊ အဆငျ့မွငျ့ဟိုတယျမြားမှာ တညျးခိုနထေိုငျစရိတျ၊ အစားအသောကျ၊ သှားလာရေးနဲ့ ရနျကုနျ သင်ျဘောပျေါမှာ ဒငျနာပါတီ အပါအဝငျ အပွီးအစီးအတှကျ တဈဦးကို ကပျြ(၇)သိနျးနှုနျးနဲ့ စီစဉျပေးထားတာပါ။
စာရငျးပေးမယျဆိုရငျတော့ ၂၀၁၉ခုနှဈ မတျလ(၁၅)ရကျနအေ့ထိ နောကျဆုံး သတျမှတျထားတဲ့အပွငျ လူဦးရလေညျး ကနျ့သတျထားပါတယျ။
တာခြီလိတျ - ရနျကုနျ - တာခြီလိတျ အသှားအပွနျကို မနျးရတနာပုံလကွေောငျးလိုငျးနဲ့ စီစဉျပေးထားပွီး ခြောငျးသာမှာ Gerizim Hotel Resort မှာ (၃)ညအိပျ၊ ရနျကုနျမွို့မှာ (၂)ညအိပျ တညျးခိုနထေိုငျဖို့နဲ့ သင်ျဘောပျေါမှာ ဒငျနာစီစဉျပေးထားတာဖွဈပါတယျ။
ခြောငျးသာမှာ ပြျောပြျောပါးပါး အပနျးဖွပွေီး ရနျကုနျမှာ လညျပတျဖို့နဲ့ ဒငျနာပါတီအတှကျ စီစဉျပေးထားပါတယျ။
ဈေးနှုနျးသကျသာ သလောကျ တနျမှတနျတဲ့ ခြောငျးသာ၊ ရနျကုနျအပြျောခရီးစဉျအတှကျ ဆကျသှယျစာရငျးပေးမယျဆိုရငျ ဖုနျး 095240445 နဲ့ 08451748 တို့ကို ဆကျသှယျနိုငျသလို တာခြီလိတျမွို့ မကာဟိုခမျးရပျကှကျ၊ မဖေလားဝါးကှငျးအတှငျးမှာရှိတဲ့ J My King Hotel ရဲ့ ကျောဖီဆိုငျမှာလညျး လာရောကျ စုံစမျးနိုငျပါတယျ။
အားလုံးအပွီးအစီး စားရိတျငွိမျး တဈဦးလြှငျ ကပျြ(၇)သိနျး
1. တာခြီလိတျ မှ ရနျကုနျ လယောဉျခ
2. ရနျကုနျ မှ ခြောငျးသာ အသှားအပွနျ ကားခ
3. ခြောငျးသာမှာ (၃)ည ဟိုတယျ တညျးခိုခ
4. ခြောငျးသာမှာ နံနကျ၊ နလေ့ညျ၊ ညစာ
5. ရနျကုနျမှာ (၂)ည ဟိုတယျ တညျးခိုခ
6. ရနျကုနျမှာ (၂)ရကျ နံနကျ၊ နလေ့ညျ၊ ညစာ
7. ရနျကုနျမွို့တှငျး ဘုရားဖူး လညျပတျ ကုနျကစြရိတျ
8. ရနျကုနျမွို့ သင်ျဘောပျေါ ညစာ
9. ရနျကုနျ မှ တာခြီလိတျ လယောဉျခ